Hiroborobo ny fizahan-tany: noho ny fanadinoana
Home » Lahatsoratra farany farany » fanorenana » Hiroborobo ny fizahan-tany: noho ny fanadinoana
Aviation • Vaovao Mafana • Fitsangatsanganana an-trano • Cruising • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Fahatadinoana ny fizahantany 1
Ny fahaizana manadino ny lakilen'ny famerenana ny fizahantany? Tsy tsiambaratelo fa ny krizy dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahitan'ny mpandeha raha toa ka mendrika fitsidihana ny toerana iray. Ka ahoana no ataon'ny mpitantana manadino ireo izay ho mpizahatany manadino ireo fahatsiarovana maharary tamin'ny 2020? Sa ve ny mpandeha dia maniry mafy ny hamongotra ireo fahatsiarovana ireo ary hanomboka vaovao?
Adinoko fa adinoko
Ny vaovao tsara ho an'ny indostrian'ny fizahantany dia noho ny fitokanana amam-bolana, ny fahaizantsika mitadidy dia niharatsy, ary azo inoana fa ny sasany (raha tsy izy rehetra) amin'ireo zava-dratsy nitranga (tsirairay na miaraka) dia hadino na hihena amin'ny hamafiny, ary hiroborobo indray ny fizahantany.
Ny foto-kevitra momba ny fanadinoana dia fiheverana lehibe rehefa miresaka momba ny fitondran-tena aorian'ny mpanjifa ny hotely, ny fitsangantsanganana ary ny fizahan-tany rehefa manomana paikady marketing azo atao izy ireo. Amin'ny fifantohana amin'ny fanadinoana sy ny fahaverezan'ny fahatsiarovana ary ny familiana ny hevitra momba ny risika, ireo mpitantana indostrialy dia mety afaka mamorona fahatakarana azo atao momba ny fizotran'ny kognitika sy ny fientanam-po misy fiantraikany amin'ny fitondran-tena mpizahatany.
Tsy fitsangatsanganana goavana ny hanaiky fa ny fiheverana ny loza mety hitranga sy ny fihetsika manoloana ny toerana aleha dia voan'ny krizy. Ny vonjy taitra sy / na ny loza dia mety hiteraka fiovan'ny drafitra fitsangatsanganana izay mety hampirisika ny mpandeha hialana amin'ny toerana haleha / manintona, hanemotra ny dia na hamafa tanteraka ny hevitra fitsangatsanganana amin'ny fandaharam-potoana fialantsasatra na raharaham-barotra.
Soa ihany ho an'ny indostria, rehefa mandeha ny fotoana, dia hadino ny voka-dratsy ateraky ny krizy, ary nihatsara ny toeran-kaleha satria ny filan'ny olona, ​​ny faniriany ary ny antony manosika azy ireo hitety dia mitaky lanja bebe kokoa noho ny risika ary mandany fotoana sy vola any amin'ny toerana itodiana sy / na manintona izy ireo. . Ny fiovan'ny fahitana dia hitranga haingana kokoa raha toa ka nandray (na toa nandray fepetra) ny tompon'andraikitra fizahan-tany mba hanatsara ireo olana hita.
Fahatsiarovana sy fanadinoana
Ny fifandraisana misy eo amin'ny fahatsiarovana sy ny fanadinoana dia avy amin'ny angano grika. Ny Memory (Mnemosyne) sy ny fanadinoana (Lethe) dia aseho ho toy ny renirano roa mifanindran-dàlana any ambanin'ny fiainan-tsi-hita sy ny endrik'ireo andriamanibavin'ny Memory sy Oblivion.
Ny fanahin'ny maty dia takiana hisotro amin'ny ranon'i Lethe mba hanadinoany ny fiainany tany am-boalohany talohan'ny nahaterahana indray, raha toa kosa ny olona vao notaomina mba hisotro amin'ny namany Mnemosyne, hampijanona ny fandikan-dalàna rehefa mahatsiaro ny zava-drehetra izy ireo ary hahatratra ny fahalalana rehetra . Ny fahatsiarovana sy ny fanadinoana dia maneho hevitra roa mifanohitra nefa tsy azo faritana.
Rehefa mamaky ny fampahalalam-baovao avy amin'ny fikambanan'ny mpivarotra any amin'ny toerana misy azy aho, vondrona hotely, seranam-piaramanidina ary mpanolotsaina momba ny fifandraisana amin'ny daholobe mandray vahiny, misy ny finoana matanjaka fa ny taona 2021 dia hahita fitsanganana indray amin'ny fizahan-tany, eto an-toerana sy any ivelany. Ny orinasam-panadihadiana momba ny fitantanana sy ireo mpitsikilo fikarohana hafa dia mitandrina kokoa, milaza fa tsy maintsy miandry sy mijery ny indostria mandra-pahatongan'ny faha-2 na faha-3 amin'ny 2021 hahita ny varavarana misokatra ary hipetrahan'ny mpizaha tany ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, fivarotana ary kianja tanàna.
Na mahatsapa izany ny mpitantana ny fizahantany na tsia, ny zavatra iankinan'izy ireo, rehefa manisa - ny valin-kasasarana aroso amin'ny fampiasam-bolany (ROI), no "fanantenana" hanadinon'ireo mpanao fialantsasatra ireo horohoro tamin'ny taona 2020 ary hahatsiarovany (miaraka amin'ny tsiky ary falifaly), ireo fotoana nahafaly niainany tamin'ny taona 2019 sy taloha. Mampalahelo fa noho io finoana io no lohalaharana ao an-tsain'izy ireo dia kely fotsiny ny zavatra ataon'ny mpitantana amin'ny fanovana ny lisitr'izy ireo amin'ny taona 2019 ary na ireo trano fandraisam-bahiny vao nosokafana aza dia tsy mampiditra paikady, haitao, lamba ary fitaovana anti-mikraoba vaovao amin'ny asany izay afaka hiatrika sy manadino ny tahotra ara-pahasalamana sy fiarovana an'ireo mpandeha an-tongotra.
Mpanoratra Laura Spinney (Pale Rider: Ny gripa Espaniola tamin'ny 1918 ary ny fomba nanovana an'izao tontolo izao), hita, “Raha mijery ny tantara ianao, ny fironantsika olombelona dia ny manadino ny areti-mifindra raha vao lasa izy ireo. Mandeha bisikileta amin'ny fifampikasohana sy tahotra isika. Mihorohoro isika rehefa mipoaka ny areti-mandringana, avy eo hadinontsika izany, miverina amin'ny fahafaham-po isika, ary tsy mandray ny dingana ilaina mba hahazoana antoka fa ho voaomana tsara kokoa amin'ny manaraka. ”
Ny fanadihadiana natao tamin'ny Desambra 2020, Coronavirus Travel Sentiment Index Report, dia nahatsikaritra fa ny fihetseham-pon'ny mpanjifa momba ny dia lavitra dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny Covid-19 ary ny fiheverana ny dia dia mizara eo amin'ny fahavononany sy ny fisalasalana amin'ny antsasaky ny Amerikanina izay tsy dia vonona loatra handao ny fiononan'ny fandriana sy ny vovoka amin'ny pasipaorony. Ny fikarohana natao nandritra ny herinandron'ny 14 Desambra 2020 dia nanondro fa ny 55 isan-jaton'ny Amerikanina nanaovana fanadihadiana dia nahatsapa ho meloka tamin'ny dia "amin'izao fotoana izao", miaraka amin'ny 50 isan-jato very liana amin'ny dia "amin'izao fotoana izao." Manakaiky ny enina amin'ny 10 (58 isan-jato) no mino ny dia tokony hoferana, manokana, amin'ny filàna ilaina ary 50 isan-jato no mamaritra fa tsy tokony ho tonga any amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo ny mpitsangatsangana, "izao" Ny antony manosika hanao dia lavitra dia afindra amin'ny Q2 an'ny 2021 miaraka amin'ny 2/3 an'ny Amerikanina mahita fa ny areti-mandringana ankehitriny dia mahatonga azy ireo tsy dia mandeha intsony mandritra ny telo volana. Ny safidin'ny vaksinina dia misy vokany tsara ary 50 isan-jaton'ny Amerikanina no mahatsapa fa mahatonga azy ireo hanana fanantenana bebe kokoa momba ny dia lavitra (ustravel.org) ny vaksininy.
Ny fandinihana nataon'ny Global Business Travel Association (GBTA) (Desambra 2020), dia nahitana fa olona telo amin'ny efatra no nanantena fa hisy mpiasa hanatrika fivoriana / hetsika manokana amin'ny Q2 na Q3, 2021. Telo amin'ireo mpikambana dimy ao amin'ny GBTA no namaritra fa ny vaksininy dia singa iray lehibe nanapahan'ny fanapahan-kevitry ny orinasan'izy ireo hanohy ny dia fivezivezena; na izany aza, 54 isan-jaton'ny orinasa mpikambana GBTA no mbola tsy matoky ny toerana misy azy ireo mikasika ny fisian'ny vaksinina sy ny fotoana ahafahana mamerina ny dia amin'ny orinasa. Rehefa vaksiny "manan-danja" ny mponina dia nanao vaksiny ny orinasa iray amin'ny dimy fa hamela ny mpiasan'izy ireo handeha hanao asa izy ireo.
Enina amby telopolo isan-jaton'ny mpiorina GBTA any Amerika Avaratra no nilaza fa nanomboka nanomana fivoriana / hetsika 2021 ny orinasan-dry zareo ary mihoatra ny antsasaky ny drafitra fihaonambe / hetsika somary antonony ho an'ny mpanatrika 500. Rehefa mihabetsaka ny mpanatrika ireo hetsika manokana ataon'ny olona dia antenaina hihena (ustravel.org).
Ny fikarohana dia milaza fa misy ny fangatahana maharitra amin'ny dia. Mba hiomanana amin'ny toekarena aorian'ny COVID-19, ireo mpitondra fanjakana nasionaly sy eo an-toerana dia manombana ny vokatra fizahan-tany ataon'izy ireo ary mifindra amin'ny fizahan-tany lavitra kokoa, mitazona vola bebe kokoa amin'ny toekarena eo an-toerana, ary mampihatra ny lalàna eo an-toerana izay hiaro ny rafitry ny tontolo iainana. ary mampitombo ny protokoleta mifandraika amin'ny fahasalamana. Hihombo ny fifaninanana amin'ny dolara mpizahatany mihena miaraka amin'ny hazakazaka hatrany ambany. Ny sehatry ny indostria rehetra dia hanolotra fihenam-bidy lalina hamenoana ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny seza fiaramanidina.
Ny mpitsangatsangana dia hisafidy toeran-kaleha, trano fandraisam-bahiny ary toerana manintona izay mampiroborobo ny fitondrana tsara tantana sy ny rafitra fikarakarana ara-pahasalamana mety. Toa tsy dia mandeha matetika ny mpanjifa fa hijanona ela kokoa. Ny mpitsangatsangana dia mety hihevitra ny areti-mandringana ho toy ny vinavina momba izay hitranga avy amin'ny krizy amin'ny toetrandro noho ny tsy firaharahana manokana sy ny besinimaro an'ilay olana.
Ho an'ireo mpandeha izay mankany amin'ny seranam-piaramanidina sy seranam-piaramanidina - dia mety ho hitan'izy ireo fa ny teknolojia dia nanolo ny fifandraisany manokana, miaraka amin'ny fanadiovana nohatsaraina manoloana ny fahadiovany; hisy ny fizahana mari-pana bebe kokoa sy ny halaviran'ny fiaraha-monina ary ny sidina sy seranam-piaramanidina sasany dia hitaky hatrany ny takian'ny mpandeha mba hisaron-tava.
Ny fitsangatsanganana an-trano dia hahita ny fitomboan'ny fizahan-tany voalohany satria ny olona dia afaka mivezivezy amin'ny fiarany, van na RV manokana izay manome fepetra azo antoka sy azo antoka. Hitombo hatrany ny dia iraisam-pirenena - atosiky ny mpanao kitapom-batsy sy ny mpandeha amin'ny tetibola ary ny hafa mitady hifandray amin'ny namana sy fianakaviana (foreignpolicy.com; wttc.org).
Amin'izao fotoana izao - TSY MISY EO… Ao! Ny Lehiben'ny Executive of the World Travel & Tourism Council, Gloria Guevara, dia mieritreritra fa hihemotra ny fizahan-tany manomboka amin'ny 2022, raha afaka mandrindra ny fihetsik'izy ireo ny mpiara-miombon'antoka fizahan-tany. Ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny fitaterana an'habakabaka (IATA) dia maminavina ny famerenana amin'ny laoniny ny taona 2024 ary i Arnie Sorenson, ny Lehiben'ny Executive of Marriott dia manantena ny amin'ny fitsanganan'ny fizahan-tany indray saingy tsy azo antoka ny fotoana hiverenany amin'ny ambaratonga 2019.
Raha mijery ny indostrian'ny fizahantany amin'ny fomba fijery ara-tantara isika dia mazava ho azy fa hisy ny fihemorana. Tamin'ny 2011 dia nisy loza niokleary Japon (orinasa nokleary Fukushima Dai-ichi). Naharitra an-taonany maro ny mpitsangatsangana mba hamerenany ny fahatokisany azy fa rehefa nahavita izany izy ireo dia nitombo ny fahatongavan'ireo olona avy any ampitan-dranomasina tamin'ny 13.4 tapitrisa (2014) ka hatramin'ny 31.2 tapitrisa (2018) ka nahatonga an'i Japon ho toerana mitombo haingana indrindra eran'izao tontolo izao.
Ny SARS dia traikefa nahatsiravina, toy ny Ebola - izay mitohy miroborobo any Afrika; na izany aza, ny famandrihana safari dia tsy nisy fiantraikany tamin'io aretina io. Raha ny tena izy dia adinon'ny olona ny fanaovana azy ho vaovao tsara ho an'ny fizahantany.